PiPad: Kiniin lagu farsameeyay qalabka Raspberry Pi | Laga soo bilaabo Linux
Inbadan waxay garanayaan mashruuca Raspberry Pi, kumbuyuutar qiime jaban (aad u hooseeya) leh oo ay suuragal ku noqotay in lagu sameeyo waxyaalo yaab leh, laga soo rakibo ku dhowaad wixii Linux distro ah ... illaa hadda, oo loo beddelayo kiniin.
Dad badani ma oga kiniin ah in la iibsado (waana taas sababta runti, ay jiraan boggag talo bixin ama fikrado ka bixiya), aniga qudhaydu haddii aan doonayo kiniin ma garanayo haddii aan u socdo Samsung, Acer, Asus, ama (waana laga door bidaa) sug kan la iman lahaa FirefoxOS. Kaalay, haddii aan heli lahaa lacag aan ku iibsado mid, waxaan fahmi lahaa sababta ay dhowr u weydiistaan ​​talo, weydiiyaan, xitaa jiritaanka mid hage iibsashada kiniinka ugu fiican.
Arrinta maanta taagan ayaa ah, Ka waran fikradda ah inaad kiniinigaaga dhisatid adigu?
Hal qof ayaa ku guuleystay, isagoo isticmaalaya looxaanta Raspberry Pi, oo ay weheliyaan waxyaabo kale, wuxuu dhistay kaniini u gaar ah:
Waxaa lagu sameeyay madera, kaarboon kaarboon iyo a batteriga kaas oo soconaya 6 saacadood (10.000 mAh), shaashad taabasho oo ka shaqeysa 5V, marka lagu daro kiiboodhka iyo jiirka ee loo yaqaan 'Bluetooth' (oo iska cad, Wifi).
Michael Castor waa hanad daaha gadaashiisa, ereyadiisii ​​ku saabsanaa waxay ahaayeen:
Waxay u muuqataa in maalin kasta soo saare ay soo saarto kiniin cusub. Khafiifsan, fududahay, dhaqso badan laakiin waxay umuuqataa inay dhammaantood isku egyihiin oo fulinayaan wax isku mid ah. Markii aan bilaabay dhisida kaniiniga Raspberry Pi waxaan doonayay wax ka duwan. Waxaan rabay nidaam dhan-in-mid ah oo waxtar leh, la qaadi karo, oo ku saleysan Linux.
Xitaa biyaha maahan 😀
Hal-abuurnimadiisa awgeed (oo uu ku soo bandhigay munaasabaddii Maker Fair) ka yimid New York) wuxuu kahelay astaanta aaska aasaasaha mashruuca Raspberry Pi Eben
Upton, oo shaki la’aan la dhacay.
Ah, wadarta qiimaha qalabka waa $ 350, inkasta oo qiimahaas aad ku iibsan karto qalab Android ah, xagee madadaalo ku jiri laheyd taas? 😀
Waxaan kuu daynayaa sawirro qaar:
Sida iska cad, qalabku wuxuu la shaqeeyaa Linux, in kasta oo aanan si fiican u kala sooci karin deegaanka mid ka mid ah sawirada si aan u ogaado haddii ay tahay LXDE ama KDE.
Sikastaba, wali waxaan sugayaa qalab kooxeed kooxeed
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » PiPad: Kiniin lagu farsameeyay qalabka Raspberry Pi
Waxaan runtii jeclaan lahaa inaan sameeyo wax la mid ah ...
By the way… Waa LXDE shaki la'aan.
Cajiib! Farshaxan. Waxaan ku dhaaran lahaa Lxde, marka laga reebo sawirka afraad, oo u eg kde.
Ku jawaab aitor_cz
Sawirka afraad waa XBMC. Waana wax iska cad LXDE, xitaa waad arki kartaa astaanta ...
Sawirada waa LXDE. Marka laga reebo taas, waa kuwan faahfaahinta:
11MHz ARM700 processor
512 MB oo RAM ah
Waxay sidoo kale leedahay Blueton shaashaduna waa 10,1 ″, booska MicroSD iyo USB ports.
Halkan sawirro dheeraad ah: https://secure.flickr.com/photos/62562887@N05/sets/72157633778482589/
Waa kan GIF kaniiniga 360º: http://makezineblog.files.wordpress.com/2014/01/pipad_gif_600_med.gif?w=600&h=512
Ku jawaab OpenBox77
La soco LXDE: D.
Sawirka afraad waa xarun warbaahin fara badan oo furan: http://xbmc.org/
Goobta: pacman -Sy xbmc
Debian: apt-hel rakib xbmc
openSUSE: zypper gudaha XBMC
Su aal baan qabaa mana ogi hadii qof ii jawaabi karo. Haddii aan rabay inaan kumbuyuutar ku dhiso Motherboard Raspberry Pi ah, sideen ku heli karaa mid. Waxaan kujiraa colombia. Runta ayaan si weyn ula socon mashruuca laakiin inta yar ee aan aqriyay waxay umuuqdeen mid xiiso badan.
Waan awooday inaan ka helo suuqa xorta ah, hal khad oo Bogota ah xitaa ma oga waxa ay tahay.
Ku jawaab berny126
Waad ku iibsan kartaa amazon ama ebay inay u diraan qafis ku yaal Miami oo ay u diraan magaaladaada Waxaan horeyba u soo iibsaday waxyaabo badan habkan haddii aad rabto faahfaahin dheeraad ah ii sheeg
Ku dhis kiniinkeyga aniga oo leh Linux ... mid ka mid ah riyadeyda xD
Mid baan rabaa! Ilaa maantadan la joogo kumbuyuutarka dareenkeygu aad umuu qabanin, xaddidnaanta darteed, maadaama aanan gabi ahaanba beddeli karin laptop-kayga, laakiin tani gabi ahaanba way beddeleysaa sawirka, ma qaadaneyso alaab-qeybiyaha billaabaya inuu iibiyo ipad-kan cusub.
Shakhsiyan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko xirmo ku taal Amazon oo leh kiis, shaashad iyo loox Raspberry PI ah.
Waxaan la yaabanahay haddii aan qaadan karo Dual Booting (Linux oo leh Arch iyo Debian oo leh deegaanno kala duwan si aan u tijaabiyo, Android barnaamijyada iyo ciyaaraha qaarkood, kadibna Firefox OS ...)
Waxaan ula jeedaa, maxaad naftaada u xadideysaa ... XD
Waa, dhab ahaan, LXDE.
Jawaab Victor Manuel Leos
Miyuu jiraa qof garanaya halka aan ka iibsan karo pique raqiis ah Mexico?
Waxay umuuqataa wax fudud in la sameeyo, waa inaan isku dayaa maalin uun.
Wanaagsan! - Maalin kasta waxaan aragnaa isticmaal badan iyo hal abuur aan ku sameyn karno Raspberry PI.
Waa wanaagsan yahay!
Kaliya 350 doolar oo hadii ay si guud u abuureen, qiyaasi qiimahooda 🙂
Ku soo jawaab Faustino Aguilar